Izinzuzo zamafutha we-emu ezinwele nasekhunjeni - i-Afrikhepri Fondation
Izinzuzo zamafutha emu ezinwele nasesikhunjeni
Li-emu yase-Australia (i-Dromaius novaehollandiae) ingeyo-oda le-Struthioniformes kanye nomndeni kaDromaiidae, okuwukuphela kwezinhlobo zalo mndeni ngaphandle kwalokho ezisaphila nanamuhla. Njengawo wonke ama-ratites (ngaphandle kwe-kiwis), i-emu inomzimba osindayo futhi oxinzekile, imilenze enamandla efanelekile yokugibela namaphiko okugijima. Le nyoni ingamboza amabanga amakhulu, ngejubane elingaguquki le-7 km / h. Iyakwazi ukufinyelela isivinini esingama-48 km / h, ngemigqa ecishe ibe ngu-2,70 m.
Umlando wamafutha we-emu
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-1000, abomdabu base-Australia bathola uwoyela we-emu basebenzisa wona ukupholisa amanxeba, ukuqeda izinhlungu nokuzivikela elangeni elishisayo. Izifundo eziningi zesayensi manje zikhombisa ukuthi uwoyela we-emu unezinto zokuphilisa ezihlukile.
Uwoyela we-Emu uwoyela we-premium.
Uwoyela we-Emu awuwona nje uwoyela kodwa ungenye yama-synergies emvelo anamandla kakhulu futhi ayinkimbinkimbi wamavithamini, amaminerali, ama-acid abalulekile, i-omega 3, i-omega 6 ne-omega 9. Inezinto zokwelapha ezidluliswayo, zokwelapha. nokudla okunempilo. Isetshenziswa njengesengezo sokudla ngesimo samaphilisi noma sisetshenziswe esikhumbeni, sihlanzekile noma sixubekile.
Isikhumba esomile noma esivuthiwe
Uwoyela we-Emu uqukethe ama-antioxidants emvelo anciphisa imiphumela yokuguga. Eduze ne-sebum yomuntu, ingenye yamafutha asebenza kakhulu okuswakama isikhumba. Kunconyelwa abantu abanesikhumba esomile noma esomile kakhulu noma abafuna ukuvikela isikhumba sabo ezimweni zezulu.
Izithako ezimbili zemvelo ezibalulekile ezitholakala ku-emu oyela yi-linolenic acid ne-oleic acid. Ukuhlanganiswa kwalezi zakhiwo zokuphulukisa kunikeza ukukhululeka ebuhlungwini bemisipha nobuhlungu obuhlangene. Umphumela uba nomphumela wokulwa nokuvuvukala ohlala isikhathi eside. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukubhucungwa kwezemidlalo.
Uwoyela we-Emu ungene esikhunjeni ngokushesha yi-hypoallergenic futhi unikeza ukukhululeka kubantu abane-psoriasis ne-eczema. Futhi inezinto zokwelapha zemvelo ezinganciphisa ukubukeka kwezibazi ezixhunywe, ngokwesibonelo, ukwelula amamaki noma ukusha. Uwoyela we-Emu usuyinto ebalulekile kwezinye izindlela zokwelashwa kwesikhumba.
Umkhiqizo wemvelo non-ocasulayo
Ngemuva kokufakwa esikhunjeni, lo mkhiqizo ongenaphunga, ongacasuli uthambisa futhi ulungise ukuthungwa kwesikhumba, ukusishiya sibushelelezi futhi singenamafutha. Izinzuzo zikawoyela we-emu zihlala isikhathi eside, ngisho nangemva kokugeza isikhumba kaninginingi.
Isongezo sokudla esicebile ku-Omega 3 no-Omega 6
Uwoyela we-Emu usetshenziswa futhi njengesengezo sokudla. Izinzuzo zayo zezempilo ziphindaphindwe ngomqondo wokuthi ukudla okunempilo nokudla okunomsoco kuqinisa amasosha omzimba futhi kugcine umzimba uphilile, kufaka nesikhumba.
Enye indlela ethokozisayo yokwelashwa.
Isibalo esikhulu sezifundo senziwe kumafutha e-emu nangezimpumelelo zesayensi ezenziwa nsuku zonke. Amanyuvesi amaningana nezikhungo ezibamba iqhaza ocwaningweni lwamafutha e-emu zingatholakala e-United States.
Zonke izinzuzo nezinzuzo:
Isiza ekunciphiseni izinkinga zesikhumba: i-psoriasis, i-eczema, isikhumba esomile, izivunguvungu, ubisi lwezinsana zabantwana ...
Iqukethe amavithamini A no-E
Iqukethe ama-fatty acids ebalulekile, i-Omega 3 ne-6
Iqukethe i-Omega 9
Ukulungisa nokuphunga isikhumba
Iqukethe i-collagen yemvelo
Ungashiyi umphumela we-greasy
Ukungena okuphezulu esikhumbeni (ubukhona bama-oleic acids)
Ayibangeli ukuvala ama-pores esikhumba
I-paraben yase-Australia yamahhala ye-emu Ultra moisturizer (250ml) Yenziwe e-Australia
Kugcine ukubuyekezwa ngoMashi 1, 2021 3:01 PM
Tribute kwaWabeladio Payi, umsunguli wokubhala uMandombe
I-Kybalion - Abaqalayo abathathu (i-PDF)